tusaalooyin warqad Cover for codsiga shaqada | USAHello | USAHello
aad diyaar u ah inay warqad cover for codsiga shaqada waa? On this page, waxaad ka heli kartaa qaab in la raaco iyo laba tusaale warqad cover. awoodaan in ay soo bixi tusaalooyinka warqad cover in Word iyo iyaga u beddeli Waxaad noqon doontaa in ay ku habboon codsigaaga u gaar ah.
Photo: iStock / itakefotos4u
Dabool tusaalooyin warqad - format wanaagsan in la isticmaalo
First aynu eegno qaab asaasi ah si fiican u shaqeeya oo dhan warqadda lifaaqa codsiga shaqada. Waxaad u abuuri kartaa warqad cover u gaar ah ka dib markii qaab this.
cinwaanka Street, magaalada, gobolka, zip code
Lambarka taleefanka | Cinwaanka emailka
[macluumaadka loo-shaqeeyahaaga xidhiidh]
Mr./Ms Gacaliye. [magaca awoowe],
qeybta kowaad ee warqadda odhan sababta aad qoraal. Sheeg booska aad u codsaneysid. Waxaa ka mid ah magaca xiriir ah labada dhinac, haddii aad leedahay mid ka mid ah. Si cad oo kooban oo ku saabsan codsigaaga. Your gool qeybta kowaad waa in uu ka dhaadhiciyo akhristaha in ay idin siin waraysiga ama ballan aad weydiisanaya.
Qaybta soo socota ee Warqaddii aad waa in lagu qeexo waxa aad leedahay si ay u bixiyaan shaqeeyaha. Show xidhiidhada u dhexeeya awoodaha iyo baahiyaha loo shaqeeyaha ee adiga.
Waxaad isticmaali kartaa dhowr cutubyada gaaban ama rasaas halkii hal block badan oo qoraalka si aad warqad waa u fududahay in la akhriyo.
Haddii aad isticmaasho dhawr cutubyada, isku day in aad ku darto macluumaad cusub halkii soo noqnoqda waxa aad hore u sheegay in ay soo noqnoqda,. Taageer statements aad tusaale haddii ay suuragal tahay.
Gabagabeeyo Warqaddii aad by mahad-shaqeeyaha, waayo, waxaad ka fiirsanaya inay booska. Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan sababta aad u jeceshahay shirkadda. Sheeg in aad sugaynaa in maqalka iyaga iyo hadalka badan oo ku saabsan jagada.
Daacadnimo / Mahadsanid / Iyada oo hambalyadeyda [mid ka mid ah, kuwaas oo dooran]
[Space for saxiixaaga halkan]
Haddaba aynu codsan format kor ku xusan in warqado muunad qaar ka mid ah. Mid ka mid ah tusaalooyinka Warqaddii hoos ku haboon yahay shaqo u baahan in shahaadooyinka xirfadeed. Shirka labaad ee ka mid ah tusaalooyin Warqaddii noqon lahaa dheeraad ah oo ku faa'iido badan ee shaqo heer bilow ah ama mid aan u baahnayn aqoonta xirfadeed.
Dabool tusaalooyin warqad - warqad tusaale shaqo professional ah
Halkan waxaa ku qoran warqad tusaale u ah shaqo u baahan aqoon ama tababar xirfadeed. Waxaa socota format kor ku xusan. Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad bedesho erayada si aad iyo aad codsigaada shaqo ku haboon. Laakiin waxaa ay muujinaysaa sida aad u isticmaali karto format ee warqad.
Gacaliye Ms. Jones,
Waxaan ahaa faraxsanahay in ay arkaan in aad raadinayso Manager ah Sales at TRP Tech. Waxaan ahay mid aad u xiiso fursaddan oo ay aaminsan yihiin in shahaadooyinkayga in iibka software, adeegga macaamiisha, iyo waayo-aragnimo maamul ee iga dhig musharax xoog booska.
Anigu waxaan ahay xirfadle hami iyo khibrad la diiwaan raadraac ah oo gaarey diirada iibka iyo abaabulka kooxaha gaaro ujeedooyinkooda. In 2016, I dhaafto gool aan iibinayay by 20% halka Shirkadda socday iyada oo afku ah iyo wakhti isbeddelkaas shaqaale aad u sarreeya.
Sida aad ka arki kartaa my resume ku lifaaqan, Waan ka sii badan 10 sano oo khibrad ah maaraynta kooxaha dhaqamada kala duwan. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo la taaban karo ee qorista, wareysanaya, iyo istaraatijiyad iibka.
Markii aan ahaa Agaasimaha Sales la Mogul.com, Waxaan horumariyo oo toogasho xeelado cusub oo iskaashi la dhisay. Waxaas oo dhan waxaa lagu sameeyey halka sare iyo tababarka kooxda ka mid ah lix shaqaalaha. Waxaan horumariyo qorshe onboarding tababarka in wali la isticmaalo by shirkadda sideed sano ka dib.
Waxaan si adag u aaminsan yihiin in aan noqon kartaa hanti qiimo leh kooxda. Waxaan si xoogan u jecel TRP Tech ay ka go'an tahay in ay hal-abuurnimo iyo sidoo kale aad uga go'an tahay in la maalgashado bulshadaada. Waxaan idinku soo dhawaynaynaa fursad ay ku wada hadlaan booska idinla, iyo waxaan jeclaan lahaa in aan ku biirsadaan aan waayo-aragnimo in ay caawiyaan TRP Tech gaaro himilooyinka ay.
Waad ku mahadsan tahay ka hor si aad u eegto. Waxaan ku hanweynahay inaan maqalka aad ka ugu dhakhsaha badan.
Dabool tusaalooyin warqad - warqad tusaale shaqo heer bilow ah a
Halkan waxaa ku qoran tusaale ahaan warqad cover shaqo in aan u baahnayn aqoon ama tababar xirfadeed ah. Waxaa socota format isla. Mar labaad, waxaad u baahan doontaa inaad bedesho erayada si aad iyo aad codsigaada shaqo ku haboon. Laakiin waxaa ay muujinaysaa sida aad u isticmaali karto format ee nooc kasta oo shaqo.
Willow Creek Hoose
Gacaliye Ms. Siberry,
Anigu waxaan arkay inay Willow Creek Elementary waxaa ay shaqaaleysato ku xigeenka maamulka. Waxaan qabaa in aan waayo-aragnimo shaqo iyo xirfado iga dhig musharax weyn marka loo shaqada. Waxaan loo gudbiyay inaad by Zhou Xun, wiilkeeda tagaa in aad dugsiga.
Waxaan haystaa saddex sano oo waayo aragnimo ah ee ka shaqeeya xafiisyada. Waxaan taageeray falanqeeyayaasha dhaqaale oo ay ka shaqeeyeen dugsiyada. Intii aan at Beijin Huwien School, Waan xajiyey diiwaanada ka badan 1,000 ardayda abaabulay. Waxaan updated files maalinta aad. Sidoo kale, Waxaan ka caawiyay in ay qorsheeyaan laba qaadhaan ururin dugsiga iyo qoob ka ciyaarka ah.
In aan shaqo ee la soo dhaafay sida kaaliyaha maamulka ee Shiinaha Maaliyadda Online Co., Waxaan ugu jawaabay telefoonada iyo soo dhaweeyay guests. Waxaan la daabacay wararka naga bil kasta iyo shirarka kooxda ka mid ah 20 todobaad kasta. sidoo kale waxaan soo qaatay iyo qoraallada la kulanka iyo Boos safarka maareeyay soo diray. Waxaan qabaa xirfadaha oo dhan u noqon lahaa mid waxtar leh in xafiiska mashquul sida idinkaa.
Waxaan mahad manhajka xoog dugsiga. Waxaan qabaa xirfadaha aan abaabulka, xereynta, iyo cilmi noqon lahaa caawimo weyn in aad shaqaalaha. Waxaan soo lifaaq aan resume iyo rajeyneynaa in aad shirka iyo ka hadasho meel this.
Waad ku mahadsan tahay waxana aan rajaynayaa in aad ka maqli ugu dhakhsaha badan.
Download tusaalooyinka Warqaddii
Waxaad kala soo bixi kartaa tusaalooyin Warqaddii. Marka aad riix link, dukumintiga si toos ah u tegi doonaa in aad downloads folder. foomamka waa in Word. Waxaad u isticmaali kartaa sida saldhig u ah warqado cover aad by beddelo erayada si aad u dalbato in aad. Download tusaalooyinka warqadda lifaaqa hadda.